Ndị na-emepụta ihe ntanetị & ndị na-eweta ihe nrụpụta | China Kedo akwa nọkwasịrị n'ịnyịnya na transformer Components
35kV Mmanụ-mikpuru abụọ ọnọdụ loadbreak mgba ọkụ
Mmanụ-mikpuru anọ ọnọdụ loadbreak mgba ọkụ
Ejiri 12kV 630A Mmanụ jupụtara jupụta ọnọdụ mgbanwe ọkụ maka mgbanaka ụdị mgbanaka mgbanaka US-igbe gbanwere iji kwado ụkpụrụ IEEE, IEC na GB nke ihe niile achọrọ. Enwere ike iji ya na usoro ala ma ọ bụ n'okpuruala. Mmanụ-mikpuru anọ ọnọdụ ibu mgba ọkụ na echichi, nso transformer isi nwere ike ibelata esịtidem njikọ USB capacitance, ma si otú budata belata akaghị na ferromagnetic resonance. Abụọ n'akụkụ arịọnụ na n'elu arịọnụ dị maka izugbe ...
Mmanụ-mikpuru abụọ ọnọdụ loadbreak mgba ọkụ
Mmanụ-mikpuru abụọ ọnọdụ loadbreak mgba ọkụ na-bụ-eji maka ọnụ ụdị American igbe mgbanwe, na mmiri na-arụ ọrụ usoro, bụ a atọ-adọ linkage mgba ọkụ iji wuchaa ibu na-agbasa na mmechi ọrụ. Site na onodu uzo abuo abuo nwere ike mejuputa usoro ngbanwe nke mgbanaka maka sistemụ nkesa mgbanaka, onodu ngbanwe onodu abuo: on, off. Enwere ike iji 10kV mee ihe maka ọrụ ike ikuku na ojiji nke ndị ntụgharị. Tupu ojiji transformer kwesịrị ihicha. M ...